Voadoboka poty (Tender sy mahafinaritra!) - Fomba Fanamboarana
mandra-pahoviana no handrahoana ovy amin'ny 350
inona no mandeha tsara amin'ny ovy nopotsehina
paula deen crock poti collard maintso
Voahazo vilany tonga lafatra
Ny mpahandro ao an-trano rehetra dia mila manana fomba fahandro mahazatra ho an'ny vilany voahandro miaraka amin'ny gravy, karaoty, ovy!
Ity fomba fahandro mora ity dia tsara ho an'ny vao manomboka ary manome vokatra tsy mampino isaky ny mandeha! Ny akoho an-tsokosoko dia fihenan'ny henan'omby lafo vidy izay mahandro ao anaty lafaoro amin'ny hafanana ambany mandritra ny ora vitsivitsy. Manampia legioma vitsivitsy sy anana mamy ho an'ny sakafo tonga lafatra.
Mitovy amin'ny Voahandro vilany Mississippi izay atao anaty vilany tsy miadana, ity vilany ity dia atao anaty lafaoro, fa azo atao koa ny manendy vilany vita amin'ny vilany eo no ho eo raha manana iray ianao!
Pot roast dia ankafizinao eo no ho eo amin'ny ankohonana rehetra! Tsy mora ny miaraka, fa mamorona sandwich voatsatsika vilany lehibe toy ny ambiny, na atsofoka ao anaty fonosana na pita. Arosoy ity fomba fahandro mahavoky fo sy mampihetsi-po ity ovy nopotsehina ary miaraka amin'ny sisin'ny mofo tongolo lay vita an-trano .
Inona no atao hoe Pot Roast?
Ity dia culinary mahazatra ary noho ny antony tsara!
Ny hena vilany dia hena henan'omby izay hena henjana kokoa amin'ny ankapobeny. Ny fandrahoan-tsakafo amin'ny mari-pana ambany dia maharitra mandritra ny fotoana maharitra dia manaparitaka ireo sela mampitohy izay miteraka hen'omby matavy miaraka amin'ny gravy misy tsiro.
Ny safidy tsara amin'ny hena hena dia asiana chuck roast (safidiko tiako), roast boribory na roast roast
Voasarona ny hena, voahodidin'ny karaoty, tongolo, ary fifangaroan'ahitra sy zava-manitra matsiro ary endasina mandra-piempo ao am-bavanao.
Fomba fahandro ny vilany andrahoina
MAHITA Ampio menaka ao anaty lapoaly ary katsaho ao anaty lafaoro ny menaka (tsara kokoa ny menaka bacon raha manana izany ianao!) Mandra-paha volontany amin'ny lafiny rehetra.
Ampio ny rahalahiny Apetraho manodidina ny natsatsika ny tongolo ary asio divay, ron-kena, rosemary ary thyme. Ento any anaty masaka ary avy eo manendasa adiny roa ao anaty lafaoro.
Mampiasà VEGGIES Manampia ovy sy karaoty ary endaso mandra-pahaleon'ny ovy, adiny roa eo ho eo. Esory ny ravina bay.
manompoa Hetezo ny natsatsika ho faribolana kely kokoa na kikisana amin'ny forks roa ary aroso.
Mandra-pahoviana no mahandro hena voaendy
Ity fomba fahandro ity dia mifototra amin'ny nendasina chuck mahazatra, tokony ho 4 lbs (omeo na raiso). Ny hena vilany dia andrahoina amin'ny maripana ambany mandritra ny fotoana maharitra mba handravana ireo sela mivaingana.
Andrahoy hena 3lb mandritra ny 3-3.5 ora
Andrahoy hena 4lb mandritra ny 3.5-4 ora
Andrahoy hena 5lb mandritra ny 4,5-5 ora
Ny fotoana fahandro dia mety miova arakaraka ny karazana nendasina. Zahao amin'ny tsorakazo ilay natsatsika, raha mafy ilay izy, angamba ilay natsatsika mila fotoana bebe kokoa mahandro. Sarony miverina ambony izy ary avelao izy hahandro hatrany.
Fomba fanamboarana gravy roast
Ity gravy ity dia tsotra sy matsiro tsotra izao, ao anatin'ny dingana 3 ihany!
Kapohina amina sotro katsaka roa ao anaty rano mangatsiaka mandra-pahazavany (antsoina hoe a slurry ).
Esory ny hen'omby ary legioma ny ron-kena ary ento mangatsiaka. Tokony hanana kaopy roa eo ho eo ianao, ampio ron-kena hen'omby bebe kokoa raha ilaina izany.
Atsofohy ao anaty ron-kena misavoana ilay slurry mandra-pahatongan'ny matevina.
Torohevitra momba ny roast tonga lafatra
Safidio ny roast izay misy marbling marobe ao aminy - izay mitondra tsiro ary manampy amin'ny fanondrahana ny gravy!
Safidy lehibe ny ovy zazakely. Tsy mitaky peeling sy mitazona tsara ny endriny izy ireo (ovy russet mirona hiraraka, na dia mbola matsiro be aza)
Hetezo somary lehibe kokoa ny karaoty sy seleria mba tsy hihoatra ny masaka
Ny anana vaovao no tsara indrindra fa ny maina kosa azo ampiasaina, ampiasao kely fotsiny satria ny ahitra maina dia manana tsiro mifantoka kokoa noho ny vaovao.
Manampia paty voatabia 2 tablespoons ao amin'ny ron-kena raha tiana.
Sakafo omby matsiro ankafizinao
Soso-kevitra momba ny hen'omby sy gravy
Cooker Barbacoa Cooker miadana
Nataonao ity Chuck Roast ity? Aza hadino ny mametraka hevitra sy naoty etsy ambany!
Fotoana fanomanana25 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo4 ORA 10 minitra Fotoana manontolo4 ORA 35 minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity Pot Roast ity dia efa voadio tsara ary aroso amin'ny legioma malefaka! pirinty Pin
▢3-4 kilao chuck roast na rast natono
▢1 ankamaroan'ireo tongolo voatoto, na tongolo kely roa
▢4 karaoty tapaho roa '
▢rOA stalks seleria tapaho ho 1 ½ '
▢1 farantsanao ovy zaza
▢1 kapoaka divay mena
▢rOA kaopy ron-kena na raha ilaina
▢4 jirofo tongolo gasy voatetika kely
▢½ sotrokely rosemary
▢½ sotrokely thyme
▢1 ravina bay
Afanaina hatramin'ny 300 ° F ny lafaoro.
Voaro amin'ny sira sy dipoavatra.
Amin'ny lafaoro lehibe iray, manaova menaka oliva 1 sotro amin'ny hafanana antonony. Mikaroha ny nendasina tamin'ny lafiny roa mandra-volontany, manodidina ny 4 minitra isaky ny lafiny manampy menaka bebe kokoa raha ilaina.
Alamino ny tongolo manodidina ny roast. Atambatra ny divay, ron-kena, rosemary, tongolo lay ary thyme. Araraka ny nendasina. Manampia ravina bay.
Ento fotsiny ny simmer eo amin'ny fatana amin'ny hafanana avo lenta. Raha vao mirehitra ny ron-kena, sarony ary apetraka ao anaty lafaoro ary endaso mandritra ny 2 ora.
Manampia ovy, karaoty, seleria, ary manendasa adiny 2 fanampiny (mandritra ny hena 4lb) na mandra-potsitra ny ovy sy ovy.
Ario ny ravina bay. Hisintona moramora ny hen'omby amin'ny sombin-javatra lehibe misy tsorakazo na silaka ho tapatapaka matevina. Aroso miaraka amin'ny ranom-boankazo (na manaova gravy etsy ambany raha ilaina).
Afangaroy ny katsaka katsaka 2 sotro fihinanana rano mangatsiaka 2 sotro mandra-pahatonga ho malama.
Esory ny henan'omby sy legioma avy ao anaty vilany ary apetaho amin'ny lovia mba hiala sasatra. Manampia ron-kena fanampiny raha ilaina izany.
Ento mangotraka ny ron-kena ary kobanina kely ao anaty vovo-katsaka, mandra-pahazo matevina.
Kaloria:579,Karbohidraty:22h,Proteinina:47h,Tavy:31h,Tavy mahavoky:12h,Cholesterol:156levitra,Sodium:377levitra,Potasioma:1491levitra,Fibre:3h,Sugar:4h,Vitamina A:6883IU,Vitamina C:roa-polo ambylevitra,Kalsioma:79levitra,Vy:6levitra
Teny lakilefomba fandrahoan-tsakafo tsara indrindra, tsakotsakoina, fomba fahandro hena, ahoana ny fomba fanamboarana vilany, fanendasana vilany, fomba fandrahoana hena Mazava ho azyBeef, Dinner, Entree, Main course masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .